DEG DEG – WAR XASAASI: Somaliland ”Inagu maamul ma nihin ee Puntland way nagu qaldantay, waxaynu nahay Dal iyo Dowlad”! (Ogow Xog Cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG – WAR XASAASI: Somaliland ”Inagu maamul ma nihin ee Puntland...
DEG DEG – WAR XASAASI: Somaliland ”Inagu maamul ma nihin ee Puntland way nagu qaldantay, waxaynu nahay Dal iyo Dowlad”! (Ogow Xog Cusub?)
Hargeysa (Halqaran.com) – Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi ayaa jawaab kulul ka bixisay hadalkii uu Madaxweynaha maamulka Puntland uu ku sheegay in uu wada heshiisinayo Somaliland iyo Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), oo warbaahinta kula hadlayey gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si adag uga hadlay baaqaasi ka soo yeedhay Madaxweyne Deni, isagoona dowladda federaalkana eedeymo u jeediyey, wuxuuna yidhi:
”Inagu Maamul ma nihin ee waxaynu nahay Dal iyo Dawlad, Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland waa ku khalad inuu inaga Maamul inagu sheego, marka uu leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland ayaan wada hadashiinayaa, oo Garowe ayaan Shir ugu qabanayaa si loo dhamaystiro Dastuurka qabyada ah, waxaan leeyahay marka hore adigu waxaad ka mid tahay Soomaaliya, Maamulkoogu waa Maamul Goboleed ka tirsan Soomaaliya”. ayuu yidhi wasiir Faratoon.
“SIR LA OGAADAY + DHAGEYSO: Yaa u fududeeya dhaqaalaha malaayiinka doolar ee Al-Shabaab ka soo gala Muqdisho & Ganacsatada!” is locked
Wasiirka wuxuu kaloo yidhi, ”Shir Somaliland aad ugu qaban karto Garowe ma jiro, Dastuur qabyo ka ah Soomaaliya oo Somaliland u yaalana ma jiro, anagu Somaliland ahaanu waxaanu leenahay Dastuur noo gaar ah, markaas marka aad leedahay Somaliland iyo Soomaaliya ayaana wada hadashiinayaana waa aragti gaaban, Madaxweynaha Puntland dhex ma noqon karo, wuxuu ka hadlayanaa waa waxay awalba ku hadli jireen qolada Soomaaliya ee uu la midka yahay”.
Wuxuuna intaas kusii daray “Soomaaliya diyaar uma aha wada-hadalada, mana doonayso inay inala hadasho, daacadna kama ah, maxaa yeelay Soomaliya waxay ogtahay inay wada-hadalada Somaliland wax badan ku waayeyso iyo inaynu ka gar helayno, madaama aynu ka gar leenahay, dood kasta oo ay ku doodo, iyo si kasta oo ay noo sheegantana wax u suurtagalaya maaha, ee waxay ka baqaysaa inay si toos ah inoola hadasho”. Wasiir Faratoon ayaa sidaa yidhi.
Ugu dambeyn, wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, ”Wadamo badani sababo kala duwan ayey aqoonsiga Somaliland u diidayaan, in badana xogogaal baanay ka ahayn xaqiiqooyinka jira, Wadamada og xaqiiqooyinka jira, sababo kale duwan ayey aqoonsiga u diidayaan, ama Wadamada Afrika ha noqodaan, ama Wadamo kale oo Caalamka ahba noqdaan, laakiin maaha in marnaba la iska indho tiro aqoonsiga jiritaanka dawladnimada iyo dalnimada Somaliland”.
Madaxweynaha maamulka Puntland, Saciid Deni ayaa hore u sheegay in uu maamulkiisu diyaar u yahay in magaalada Garoowe ay martigeliso shirar looga hadlayo maqaamka Muqdisho iyo wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Puntland way nagu qaldantay
Somaliland ''Inagu maamul ma nihin
Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon
axmed August 30, 2019 At 11:38
Wasaaradiiba hadii lagu aamini waayey, maxaa isaga meesha dhigay, ma waxa loo haystaa, in hadba hadal loo yeeriyo miskiin. ninbaa la hoos dhigay. Sacad ka amar qaado ,hadii kale aaaaammmmkkkk.